I-Peruvian Body Wave Virgin Hair Hair Ukuvalwa ... Soie Hair Atlanta I-Peruvian Body Wave Virgin Hair Hair Ukuvalwa ... Soie Hair Atlanta
I-Peruvian Body Wave Virgin Hair Hair Ukuvalwa ... Soie Hair Atlanta - Soie Virgin Hair Extensions
Izinwele zethu ezintle zasePeruvia ezinobuntombi ziphezulu, zibambe imibala kakuhle kwaye zinokuphengulwa, zilubala, ziguqulwe, kunye nesitayela kaninzi ngaphandle kokulahlekelwa ukukhanya kwayo. Ukuvalwa kweentloko zomntu ngamnye kuvela kumnikezi omnye ukuqinisekisa ukuhambelana kwemveliso yethu.
yethu I-Peruvian Body Wave VUkuvuselela Ubunwele Bobuntu are ezenziwe kuphela kwizinwele zobuntombi ezintle kakhulu. Izinwele ziza kugcina iminyaka ye-2 okanye ngaphezulu ngenxa yamandla angenangqondo yeentloko zezinwele kunye ne-cuticles.
100% Inwele Yentombi Yomntu!
Uya kugcina iminyaka eyi-2 okanye ngaphezulu.
Ukufikelela kwi-20 intshi ubude.
Yenziwe nge-100% I-lace yase-swiss echanekileyo
AmaNotshu awanalo i-bleached (Mema ukuba ubuze malunga ne-bleaching).